आँचल र वर्षाको झगडा ! (भिडियाेसहित) – Ramailo Sandesh
आँचल र वर्षाको झगडा ! (भिडियाेसहित)
नेपाली चर्चित नायिका हुन् आँचल शर्मा र यस्तै अर्कि नायिका हुन् वर्षा राउत । यसैगरि करिब ७ महिना अगाडि रिलिज भएको गीत ‘माया गरौंला’ गीतलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए । उक्त गीतमा सरोज ओली र अस्तिमा अधिकारीको आवाजमा रहेको छ । यो गीतले युट्युबमा १ करोड ४३ लाखभन्दा बढी भ्यूज कमाइसकेकाे छ ।
आज बिहिबार त्यही चर्चित गीतको दोस्रो भाग ‘माया गरौंला २’ (ब्रेकअप) सार्वजनिक भएको छ। किरण भुजेल र समीक्षा अधिकारीको आवाज रहेको गीतमा तिलक चन्दको शब्द र कृष्ण भारद्वाजको संगीत छ। गीतलाई जीवन बडूले एरेन्ज गरेका छन्।
गायक सरोज ओलीकै निर्देशन तयारमा निर्माण भएको गीतको भिडियोमा पुष्प खड्का, वर्षा राउत, सागर लम्साल, बले र आँचल शर्माको अभिनय देख्न पाइन्छ। विक्रम स्वारको कन्सेप्ट कोरियोग्राफी रहेको भिडिओ नवराज उप्रेती र उनको समूहले खिचेका हुन्। भिडियोमा सुवर्ण दुलालको सम्पादन छ ।
धुर्मुस सुन्तलीलाई जोक्करहरुले रंगशाला बनाए भन्ने को हुन् ?
चितवनमा निर्माण हुँदै गरेको वहुप्रतिक्षित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक अभाव सिर्जना भएको छ । निकै ठूलो लगानीमा सुरु गरिएको रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक अभाव भएपछि धुर्मुसको टोली मेचि महाकाली अभियानमा निस्किएको छ ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको अगुवाईमा रंगशाला निर्माणको काम सुरु भएको हो । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नामाकरण गरिएको सो रंगशाला निर्माणका लागि सरकार र सर्वसाधारणको लगानी छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सहयोग उठाउँदै रंगशाला निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ ।
क्रिकेट मैदान निर्माणमा आर्थिक अभाव भएपछि सहयोग जुटाउन सिताराम कट्टेल धुर्मुस मेची महाकाली अभियानमा निस्किएका छन् । रंगशाला निर्माणको लागि आर्थिक संकलन गर्न अभियानमा निस्कदा उनलाई रंगशाला निर्माणमै जुटेका मजदुरले विदाई गरेका थिए । उनीहरुले विदाईका क्रममा बाटोमा लाग्ने खर्च उठाएर धुर्मुसलाई दिएका थिए ।
मेकअप लगाएर सुत्नु घातक. हुन्छन् यस्ता बेफाइदा !
पहाडमा २०० र सहरमा ५०० संक्रमित नाघे निषेधाज्ञा, नियन्त्रणबाहिर गए लकडाउन
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिता डंगोलले ?
एउटै वडामा श्रीमान् एमाले र श्रीमती कांग्रेसबाट निर्वाचित, दिएनन् एकअर्कालाई भोट
खुट्टाको नशा बटारिएर फुल्ने गरेको छ ? उसोभए आजैबाट खान छोड्नुहोस् यस्ता चिज
भरतपुरमा झन्-झन् बढ्दै रेनुको अग्रता
जेठ ५ गते बिहिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल